Home » My Dear Diary » ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး
Wow ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ပြီးခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ “ငယ်အိမ်မက်” ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပီး နဲနဲ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သီအိုရီပိုင်းကိုတော့ ပညာရှင်တွေအကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်… ကျနော်ကတော့ ကျပ်မပြည့်သူ အူတူတူမို့ ဥာဏ်မှီသလောက်ပဲ တွေးပါတယ်…
အနော်အောက်ဆီဂျင်ခမျာ… အောက်ဆီဂျင်အဖြစ်နဲ့လူသားတွေကို အကျိုးပြုဖို့ အရမ်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာ က မျက်နှာသာမပေးလို့ မော်လီကျူးတွေပိုလာပီး CO2 ဖြစ်သွားတယ်… အနော့်ကို အောက်ဆီဂျင်လို့ပဲ သဘောထားပီး ရှုပေးဂျဘာာာာ… ရမလား… လာဇတ်နာမပြနဲ့ ဘူသူမှ အီးမရှုဘူး
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်တုံးက ကျနော်တို့ရုံးမှာ မြို့သစ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး ပရောဂျက်တစ်ခု ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ Water Supply Plant အတွက် နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်းကိုသုံးကြပါတယ်။
ဆိုတော့…. အဟွတ်… အဟွတ်… အဟမ်းးးးး
နောက်တစ်ခုက quality control ကိစ္စပေါ့နော်၊
တွင်းထွက်ဆိုရင် ရှားပါးရမယ်၊ အရောင်ကနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရမယ်၊ မာကျောမှုအဆင့်တစ်ခုရှိရမယ်… အဲတာမှရတနာ လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်…
ချစ်တော့ချစ်တယ်… မလာဘူးဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေးပဲ လာလောက်အောင်မချစ်လို့ပါ…
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာလဲ Exception တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်… ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင် လက်မခံနိုင်ကတော့ ကျနော်တို့အပိုင်းပေါ့လေ….
နိအာ့ဂျောင့် ယောက်ကျားမရတာလို့တော့ မပြောဂျနဲ့နော်…
မလိမ်မာဝူး လူဇိုးမဂျီးလို့ ပေါချင်တာလားငင်င်င်
အဝှာမပါဒဲ့ အခြစ် ဆားမပါဒဲ့ဟင်း ချားရသလိုပဲ မီကောင်း မီကောင်း…
၀ိုးရယ် နင်လည်း ငါနဲ့ တူတူပဲ တသက်လုံးတယောက်ထဲသာ နေတော့ :cryy:
နာတို့နှစ်ယောက်ယူဂျမယ်လေ… လူမိုက်ခင်ဇော် မသိစေနဲ့
နိ ပို့(စ) မြင်လို့ ရွာထဲ ဝင်လာတဲ့သူ ရင်ကို ဒီလို ခြေစုံကန်ရသလားး
ပို့(စ) ထဲမှာ မောင်လေး လှိုင်ကို ဖျာရောင်းထားတာလည်း ဖျက်ပေးဘာ။
အဟွာလေ.. မယ်ပုကိုက လဂါးစတာ… ရမားလို့
မောင်လေးလှိုင်ဆိုတာ မိုးလေးကို ပေါဒါလား အဟွတ်….
အချစ်ကတော့ ဟွာလေ သူများကိုယ့်ချစ်မချစ်ဆိုတာတော့ တိုင်းရမာပေါ့ ကွကိုယ်တော့ ချိန်ခွင်ထဲ ဘယ်ဝင်ထိုင်မလဲ… နာက လူလည်ပါ
ဖြစ်လေရာဘဝ ဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်ပါဇီ ဝိုးမမရေ
အာ့ဆို နိကတော့ ဖစ်ချင်ရာဖစ်နေတာပေါ့နော်
ဘာမှ မဖြစ်​တဲ့​နောက်​ ဘာများဖြစ်​​စေ့ချင်​လို့လဲကွယ်​ ။
“အချစ်​ဆိုဖြစ်​ဖို့ ကိုယ်​ခံအားနည်း​နေဖို့လိုတယ်​ ” ( ဘယ်​သူ​ပြောသွားသလဲ လိုက်​ရှာမ​နေနဲ့ ခုမှ “​နေ၀န်းနီ “​ပြောတာ ) အဲ့ ဒိ​တော့ အချစ်​မ​တွေ့​သေးတာ ကိုယ်​ခံအား သိပ်​​ကောင်း​နေတယ်​လိုပဲ မှတ်​ယူလိုက်​​တော့ ၀ူး ​ရေ
ဟယ် အာ့ဆို အနော်က ရမ်းရမ်းဂျီးကို တော်နေတာပေါ့နော်
ဟယ် အဘနီ အဲ့ဒါတကယ်လား ၀မ်းသာစရာပဲ
ဘယ်နဲ့ လဗျိုဂျီး ပြောတာ အဟုတ်မှတ်မနေကြနဲ့ ဒီ နှစ်ကောင်။
အာ့ချို ချွိပေါဒဲ့အတိုင်းးး ကင်ဆာဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ပါ…
အာ့ဆို နာလည်း ကြောက်တယ် ဆွိစကားပဲ နားထောင်မယ် :loll:
အသိ ဦးလေး တစ်ယောက် ပြောဖူးတယ်။
အစဉ်းစား လွန် ကုန်ရင် အဲ့လို ကိုယ်ခံအား တွေ သိပ်ကောင်းလွန်း ကုန်မယ် ပေါ့လေ။
မိုက်သဗျာ အဘနီ ရာ။
သီအိုရီ တွေ ပိုက်ပြီး ပြန်လာမယ် ဟေ့။ :))
အခု တော့ ပြေးရဦးမယ်။ lol:-)))))
ဘယ်ရမလဲ ချစ်အရီးလေးကို ထောင်ဖမ်းနေတာ
.စိတ်ညစ်တယ်။ အပျိုကြီး သုံးယောက်ကို စကားတစ်ခွန်း တိုးတိုးလေး ပြောမယ်။
အိုက်ပို့စ်လေး စောင့်ပီးမ ယောက်ကျားယူရမာပေါ့နော်
အချစ်​လား ဒီအိမ်​မှာ မ​နေတာကြဘီ
အချစ်ဆိုတာ အတဲ့သူတွေ ချစ်တာဆိုပဲ…
ဘာသီအိုရီမှ မရှိတော့ ဘာမှလည်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်။
အေးအေးချမ်းချမ်း ကြာခွက်စားနေတာပဲကောင်းပါတယ် တီဒုံရာ
အောင်မြလေး။ CO2 ကိုများ အပေါစား မှတ်လို့လား။
ပြောရင်မယုံဝူး နောက်တယ်ထင်တယ်… နာက ပေါက်ကရအဆင့်ပဲရှိပါဒယ်ဆို.. သိပ်အလေးအနက်ကြီးတွေ တွေးမျအူး
ဆိုလိုတာက ဘီလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် … ဟီးးးး
ကျနော့်ထက် ပညာအားဖြင့်ကြီး တဲ့လူကြီးတွေကို နောက်သလိုဖြစ်နေရင် ခွင့်လွတ်ပါ၊ တီဒုံတို့ အရီးတို့….
အဲ့ မင်းသား ရဲ့ စရိုက် လေးများ အကြမ်းဖျင်း သိခွင့်ရလေမလား။ သိချင်တယ်။ :))
အနော့်လို ဗာဂိုပါပဲ အရီး
နိပဲပေါ့ ဟိုမလောက်လေးမလောက်စားနှစ်ယောက်က စာရင်းကိုမရှိ
အချစ်ဆိုတာ Tap Water လို လှည့်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ သောက်လို့မရတာ အမှန်ပဲဗျ
ချစ်ခြင်းဆိုဒါ ၀က်အူချောင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ
-မိန်းမတို့ လုံ့လ..သေခါမှ လျှော့ရမယ် ပေါ့ခညာ
ဟုတ်တယ်… ကျီပြာလေးပြောတာမှန်တယ်… ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လုပ်ပစ်မယ်
:byee: :hee: :sar:
အာ့လဲ မှန်တာပဲ စားဖို့က အရေးအကြီးဆုံး…
အော့ တူမရေး ရွာက နွားကြီး ကင်စားဂျမယ်..
တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ အချစ်ဆိုတာ အရာရာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိတာပဲ